Ambience: Inoenderana Chigadzirwa Kurudziro mune Zvemukati | Martech Zone
Ambience: Inoenderana Chigadzirwa Kurudziro mune Zvemukati
China, July 24, 2014 China, July 24, 2014 Douglas Karr
Kune nyika yezvinyorwa kunze uko iri kukura zuva nezuva. Zvakawanda zveruzivo rwekushambadzira chigadzirwa ndechekutora zvimwe zviongororwa zvechigadzirwa zvakagoverwa mukati mewebhu, kukwezva avo vaverengi vadzokere kune peji rezvigadzirwa uyezve Pushira muverengi kuti atendeuke. Sofia's ecommerce chikuva Ambience ™ inoisa iyo chigadzirwa chigadzirwa uye kurudziro mukati mezviri mukati - zvakagadziriswa kuti zvionekwe uye zvinoenderana nezviri mukati zvinokurukurwa. Izvi zviri kutyaira kwakanyanya kukwirisa mwero paSophia saiti.
Ambiance ™ i-e-commerce widget iyo inogara unobtrusively padyo nemuparidzi zvemukati kuratidza otomatiki zvigadzirwa zvakakosha zvekufarira kune vaverengi pavanotarisa. Nekuita zvemukati kuti zvitengeseke, zvinopa imwe nzira yekuwana mari kune vaparidzi uye nekuti zvigadzirwa zvinowedzeredza zvirimo padyo, vaverengi vanobva vanyanya kuita basa rinotungamira kunatsiridza saiti kuomerera uye kuwedzera kuvimbika.
Uku kukura kunokatyamadza muwebhu, kusanganisa ruzivo rwemapeji echigadzirwa uye nzvimbo dzekutenga neruzivo uye nemamiriro ezvinyorwa zvakanaka. Vaparidzi vanonyora zvemukati zvakanaka vanogona kuzviitira mari zvirinani. Uye ecommerce masaiti ane zvigadzirwa zvavanotarisira kusimudzira munzvimbo dzese dzekutsikisa izvozvi vane mukana wekuita kuti zvigadzirwa zvavo zvionekwe uye zvinyore-kuburikidza.
Tags: vashambadziambiencezvemukati-zvinowaniswa nekutengae-commerce widgetecommerce widgetchigadzirwa kurudzirovaparidziSophia
Douglas Karr Thursday, July 24, 2014 Thursday, July 24, 2014
Kugonesa Yako Email Mifananidzo yeRetina Inoratidza
Tenga Yako Spot: Yenhare Yekutengesa App Yakavakirwa Mutengi